बुधले राशि परिवर्तन गर्दै: कुन राशिलाई फाइदा,कुनलाइ क ष्ठ थाहा पाउनुहोस – " सुलभ खबर "
बुधले राशि परिवर्तन गर्दै: कुन राशिलाई फाइदा,कुनलाइ क ष्ठ थाहा पाउनुहोस
बुध ग्रह राशी चक्रको तेस्रो राशी मिथुन र छैठौं राशी कन्याको राशी स्वामी हो । बुध वाणीको कारक ग्रह हो। ज्योतिष शास्त्रले बुध ग्रहको राशी परिवर्तनलाई ठुलो संयोगको रुपमा लिने गर्छ ।
प्रत्येक राशी अनुसार बुध ग्रह जुन राशिमा प्रवेश गर्छ सोहि राशी अनुरुपको फल दिने गर्दछ । बुध ग्रहले यहि मंसिर १९ गते बिहानको ११ बजेर १ मिनेटमा राशि परिवर्तन गर्दैछ। । मंसिर १९ वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्ने बुध पौष ९ गते सम्म यहि राशिमा रहनेछ।बुधको राशि परिवर्तनले कुन राशिलाई कस्तो असर पार्ला ? हेर्नुहोस् !
मेष : कार्यक्षेत्रमा अवरोधहरूको सामना हुन सक्छ। समयमै निर्णय लिन समस्या पनि होला। यधपी आर्थिक रुपमा भने बुधको राशि परिवर्तन लाभदायक नै हुने देखिन्छ।
वृष : प्रेमजीवनमा सुखद परिवर्तन हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवन साथै पारिवारिक जीवनमा पनि समय सुखद रहला। साझेदारीको व्यवसायबाट उल्लेख्य आर्थिक लाभ मिल्ने योग देखिन्छ।
मिथुन : स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु होला। सकेसम्म यात्रा नगरेकै उचित हुने देखिन्छ। बिना कारण झगडा हुन सक्ने हुँदा व्यवहारमा नियन्त्रण राख्न आवश्यक देखिन्छ। शत्रुहरूबाट पनि सतर्क रहनु पर्ला।
कर्कट : पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्य बिग्रिंदा समय साथै धन खर्च हुन सक्छ। संचित गरिएको धन खर्च हुन सक्ला। परिवारमा सल्लाह नगरी गरिएका निर्णयले दुख दिने सम्भावना पनि छ। यधपी उच्च शिक्षाको लागि भने समय अनुकूल रहन सक्ला।
सिंह : बुध राशि परिवर्तनको प्रभाव चल अचल सम्पत्तीमा पर्ने देखिन्छ। राशि परिवर्तनसँगै धन बढ्ने देखिन्छ। लगानी गरिएका क्षेत्रबाट प्रतिफल मिल्न शुरु होला। पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्यमा सुधार आउँदा मानसिक रुपमा बलियो भएको महशुस हुनेछ।
कन्या : बुधको राशि परिवर्तनसँगै कन्या राशि हुनेहरुलाई अनेक प्रकारका लाभ मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रुपमा समय सुखद रहन सक्ला। साहस, पराक्रम र आत्मविश्वास बढ्नेछ भने सम्बन्धहरु बलियो बन्नेछन्।
तुला : राशि परिवर्तनको प्रभाव बोलिमा पर्ने देखिन्छ। धेरै समय देखि अड्किएका कार्य बोलि र व्यवहारकै कारण सफल हुनेछन्। सामाजिक रुपमा पनि उपस्थिति बढ्न सक्ला। धन बचतमा पनि सफलता मिल्न सक्छ।
वृश्चिक : बुधको राशि परिवर्तनले वृश्चिक राशि हुनेहरुलाई दुख दिने देखिन्छ। विभिन्न कारणहरुले गर्दा मानसिक रुपमा तनावहरु बढ्नेछन्। सकेसम्म कानुनी झमेलामा नाफसेकै उचित होला। परिवारमा कसैसँग बहस समेत हुन सक्ने हुँदा बोलिमा नियन्त्रण राख्नु होला।
धनु : बुधको राशि परिवर्तनले वित्तीय क्षति पुर्याउन सक्छ। गरिएका लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा सतर्क हुन जरुरत छ। स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउन सक्ने हुँदा खान-पानमा ध्यान दिनु होला। शत्रु सक्रिय होलान्।
मकर : आम्दानी बढ्दा आर्थिक समस्याहरु क्रमिक रुपमा हट्दै जानेछन्। शारीरिक साथै मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। शत्रु समेत मित्रमा परिणत हुने सम्भावना छ। नयाँ सम्बन्धले लाभ पुर्याउन सक्ला।
कुम्भ : बुधको राशि परिवर्तन कुम्भ राशि हुनेहरुको लागि खासै सुखदायक हुने देखिँदैन। कानुनी रुपमा समस्या बढ्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदा सतर्क रहनु होला। असन्तुष्टि को भावना दिमागमा उग्र बन्न सक्छ।
मीन : बुधको राशि परिवर्तन मीन राशि हुनेहरुको लागि शुभ देखिन्छ। जीवनमा विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्लान्। धेरै समय देखि भेट नभएका प्रियजनसंग भेट्ने अवसर जुर्न सक्छ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ भने ज्ञान वृद्धि समेत हुन सक्ला।